June 2012 ~ ဆုံနေကြ
ယနေ့ အကြိုက်ဆုံး FACEBOOK မှ ကွန်မင့်...။
Saturday, June 30, 2012 လပြည့်ဝန်း No comments
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ..အမေစုက ၁၉၉၀ မတိုင်ခင်ကတည်းက ဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ်..၊အဲဒီတုန်းကတည်းက စကားတွေပြောနေတာပဲ..အခုမှမဟုတ်ဘူးနော်..
၊မြန်မာစကားရော..အင်္ဂံလိပ်စကားရောပြောခဲ့တာ...အဲဒီတုန်းကတည်းက နိုင်ငံရဲ့အမည်ကို အင်္ဂံလိပ်လိုပြောရင် burma လို့ပဲပြောတယ်...ဒါလဲ အင်္ဂံလိပ်အခေါ်အဝေါ်မို့နားကလောတာပေါ့ဗျာ..၊ဒါလဲမှန်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုမှ..
ဘာလို့သတိပေးနေရတာလဲ(အစိုးက)..နှစ် ၂၀ လောက်အတွင်းမှာ BURMA လို့သုံးခဲ့တာမနည်းဘူး...၊ဒါပေမဲ့အဲဒီခေတ်ကတည်းက...စစ်အစိုးရ(ပိုတင်းကြပ်တဲ့ခေတ်)မှာတောင်
တိုင်းသတင်းထောက်တွေနဲ့တွေ့တယ်.အဲဒီမှာလဲ BURMA လို့သုံးခဲ့တာပဲ.၊
အဲတုန်းကလဲမသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်...အဲဒီတော့တကယ့်လိုရင်းက..အခုမှဘာလို့ ဒီလိုသတိပေးတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှန်ကိုသုံးသပ်ရမဲ့ကိစ္စ ပါ၊..ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုပြောတာလဲ..၊ဒါပဲလိုအပ်တာ..၊
ညှိနှိုင်းမှုတွေတောက်လျောက်လုပ်နေကြသင့်တာ ...သုသေတနတွေ plan တွေဆွဲနေရမှာ..အခုအဲဒီလိုမလုပ်တဲ့အပြင်ဗျာ...ပြောကိုမပြောချင်ဘူး....၊၊
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပငါးနိုင်ငံခရီးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ လေဆိပ်အထွက်မှစ၍ ပြည်လမ်းတစ်လျောက် ပြည်သူများနှင့် ထောက်ခံသူများက NLD အလံများ ကိုင်ဆောင်ကြိုဆို
ဥရောပခရီးစဉ်အဖြစ် ဆွစ်ဇာလန်၊ နော်ဝေ၊ အိုင်ယာလန်၊ ဗြိတိန်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံများသို့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်သွားရောက်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်တွင် ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း TG 303 ဖြင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုက်ပါလာသော လေယာဉ် TG 303 သည် နံနက် ၈ နာရီ ၅၀ မိနစ်အချိန်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ဆိုက်ရောက်မည်ဟု ကြေညာခဲ့သော်လည်း လေယာဉ် delay အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်၍ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်၌သာ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့သည်။
ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် နံနက် ၆ နာရီ အချိန်ဝန်းကျင်ကတည်းကပင် လေဆိပ်အတွင်း၊ အပြင်တွင် ကြိုဆိုရန် စောင့်ဆိုင်းသူများ ရှိခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စတင်တွေ့ရှိရချိန်မှစ၍ လာရောက်ကြိုဆိုသော ပြည်သူများအပြင် လေဆိပ်အတွင်းရှိသူများပါ လက်ခုပ်တီး၍ သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ခရီး သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ ပြင်သစ်သမ္မတ ဖရန်ဆွာအော်လွန်ဒ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး LaurentFabius၊ ပါရီမြို့တော်ဝန် Bertrand Delanoe၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် သီးခြားစီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့မှ ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တောင်ကြီးမြို့ ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲ အား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ က ပိတ်ပင်
ယနေ့ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့ တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် တောင်ကြီးမြို့ရေအေးကွင်းရပ်ကွက် ကမ္ဘောဇလမ်းရှိ ဟုတ်ကြန့်ဘုံကျောင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲ အား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ က ကျင်းပခွင့် မပြုဘဲ ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၏ ခွင့်မပြုကြောင်းကို တောင်ကြီးမြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ခေါင်မှတစ်ဆင့် ရေအေးကွင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတစ်ဆင့် ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကို အကြောင်းကြားရန် အဆင့်ဆင်ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ခွင့်မပြုကြောင်း ရုံးတွင်း စာမထွက်ခင်ကတည်းက တောင်ကြီးမြို့ နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ က ခွင့်မပြုကြောင်းခေါ်ယူပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် (လူငယ်) နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား (ရှမ်းပြည်နယ်) အဖွဲ့ က ဦးဆောင်ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလ ၁၇ ရက်တွင် တောင်ကြီးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အခမ်းအနားကျင်းပရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀ ရက်တွင် အခမ်းအနား ပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးက ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် နေပြည်တော် သွားရောက်နေသဖြင့် တာဝန်ယူ ကျင်းပခွင့် မပေးခဲ့သောကြောင့် ၃၀ ရက်နေ့ ကို ရက်ရွှေ့ ဆိုင်း ခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။ ကျင်းပရန် တစ်ရက်အလိုတွင် ယခုကဲ့သို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ က ခွင့်ပြုခြင်း မရှိဘဲ ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ တွင် ဘာသာပေါင်းစုံ ခေါင်းဆောင်များမှ နိုင်ငံတွင်း အေးချမ်းသာယာရေး ဘာသာပေါင်းစုံ ညီညွှတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးတို့ အတွက် ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပရန်သာ ရည်ရွယ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင် အလှူငွေပေးအပ်ပွဲပါ ပူးတွဲကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
ညီညွှတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးတို့ အတွက် ကောင်းမွန်စွာ ရည်ရွယ်တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား ပိတ်ပင်တာ မသင့်တော်ပါဖူး။
ဥရောပနိုင်ငံများသို့၁၇ ရက်ကြာသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြည်လည်ရောက်ရှိလာသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားပြည်သူလူထုကြီးမှ တခဲနက်ကြိုဆို
ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင် လည်းလာရောက်ကြိုဆို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ လာရောက်ကြိုဆိုသည့် အနုပညာရှင်အချို့
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အသွားလမ်းတလျောက် ကြိုဆိုရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ယနေ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အသွားလမ်းတလျောက် ပြည်သူအများက ကြိုဆိုရန် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥရောပခရီးစဉ်မှ ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါက်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသူ
ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် -ဓါတ်ပုံ ဂျေမောင်မောင် ( အမရပူရ )
ရန်ကုန် လေဆိပ် သို့ဆိုက် ရောက်လာစဉ် ကြို ဆိုသူ များ နှင့် အတူ တွေ့ 
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဥရောပ ခရီးစဉ် ဓာတ်ပုံ များ ကို ကြို ဆို နေသူ များ က ဗီနိုင်း ၊ ပိုစတာ များ ထုတ် ပြီး ကြို ဆို ကြသည် ဟု သိရသည်။
Photo credit to : The Voice Weekly.
ရန်ကုန် နိုင်ငံ တကာ လေဆိပ် တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ကြို ဆို ရန်စောင့် ဆိုင်း နေသူ များ Photo credit to : Messenger Journal .
ဥရောပနိုင်ငံများသို့ ၁၇ ရက်ကြာသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြည်လည်ရောက်ရှိလာမည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ယနေ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ ပြည်သူအများက ကြိုဆိုရန် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စီးနင်းလိုက်ပါလာသော လေယာဉ်မှာ မြန်မာစံတော်ချိန် ကိုးနာရီခွဲခန့်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်မှထွက်ခွာလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံများ- The Messenger's facebook
Friday, June 29, 2012 လပြည့်ဝန်း No comments
မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြင်သစ် Sorbonne ကောလိပ်မှာ ၂၈.၆.၂၀၁၂ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့(conference)သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ(ရုပ်/သံ)
La cité de la réussiteaeu la chance de recevoir Madame Aung San Suu Kyi, députée birmane, Prix Nobel de la paix, lors de sa tournée européenne pour une rencontre exceptionnelle.
အခုတလော ဒေါ်စု ဆန့်ကျင်ရေး အုပ်စုတွေက ဒေါ်စု နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောမိန့်ခွန်း တွေမှာ ထည့်သုံးတဲ့ Burma ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ် ကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး ကြံဖန်အပြစ် တင်နေကြပါတယ်။
by Duwa Kachin _ facebook မှ
၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ လဖိုင်နော်မိန်းဟာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာ စိန်လုံဒေသ ကောင်းဝဲတိုက်ပွဲအတွင်း ကိုယ်တိုင်သွားရောက် သတင်းယူနေချိန်မှာ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့ ပစ်ခတမှုကြောင့် သေနတ်ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး လည်ပင်းအောက်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး မလှုပ်ရှားနိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့် ရရှိတဲ့ဆုကို ရန်ကုန်နာရေးကူညီမှုအသင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဧရာမောင်မောင်က ကိုယ်စားယူပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အဆိုပါစာအုပ်ထွက်ပြီဟု ဆိုသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တွင် အဆိုပါစာအုပ်၏ ကော်ပီဓာတ်ပုံများကို လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ မျိုးဆက်သစ် နိုးကြားသူများ စုစုပေါင်း ကဗျာဆရာ ၂၅ ဦး၏ ကဗျာများ ဖြစ်သည်။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုရေးအတွက် ပြည်သူလူထုအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။
မိမိတို့ နိုင်ငံမှ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ချီးမြင့်သော ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်လ်ဆုအား နိုင်ငံ့ဂုဏ်၊ မြန်မာတမျိုးသားလုံးကိုယ်စား ဆောင်ယူမြင့်တင်ကာ လက်ခံရယူအပြီး အလွန်ကြီးမြတ်လှသော တိုင်း ကမ္ဘာသိ မွန်မြတ်လှသော ငြိမ်းချမ်းမှု ဆုတံဆိပ်များ၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များဧ။် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပေါ် ကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေမည့် ထောက်ခံအားပေးမှုများ
ကို ဆောင်ယူပြီး နိုင်ငံ အနာဂတ်ရောင်ခြည်အလင်းများ တပွေ့တပိုက်ဖြင့် အမိမြေဆီသို့ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆိုက်ရောက်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ မနက်ဖြန် ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ နံနက် (၈) နာရီ အချိန်ခန့် တွင် ရောက်ရှိလာမည့် လူထုခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုကြရန် ဖြစ်ပါသည်။
သမိုင်းတခေတ်တွင် တကြိမ်တခါမျှသာ ကြုံဆုံခွင့် ရနိုင်သော ယခုကဲ့သို့ ထူးခြား အံ့ဘနန်း အဟုန်အရှိန်ပြင်းစွာ ဂုဏ်ယူလေးစားဖွယ် အောင်ပွဲခံအပြန်ခရီးကို မြန်မာပြည်ကို ချစ်သော မြန်မာ့ အနာဂတ်အရေးကို စိတ်ဝင်စားသော ပြည်သူပြည်သား မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် လမ်းခရီးတလျောက် စောင့်ဆိုင်းကြိုဆို ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြင့် မြန်မာဟူသည် ဒီလိုဟု ဇာတိဂုဏ်ပြသကြပါရန် လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းပါသည်။
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် မြန်မာ့လူထုခေါင်းဆောင်၏ အောင်ပွဲခံအပြန်ခရီးအား လေဆိပ်မှ နေအိမ်ထိ အပြန်ခရီးတလျောက် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အမေစုကို မြတ်နိုးသူများ စုဝေးရောက်ရှိ စနစ်တကျ စီတန်း ကြိုဆိုကြမည်ဆိုပါလျှင် လေဆိပ်မှ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတလျောက် စနစ်တကျ စီတန်း စောင့်ဆိုင်း ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြမည် ဆိုပါလျှင် လူဦးရေ သန်းနှင့် ချီပြီး ကြိုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
ညီညွတ်စည်းကမ်းရှိစွာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတွင် ထင်ရှားသော လူထုကြိုဆိုပွဲကြီး တခုဖြစ်လာမည်သာမက မြန်မာ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးတွင် လက်ရှိ သမတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အတူတကွ ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံသားတိုင်း မျှော်လင့်တောင့်တနေသည့် အသွင်ပြောင်း ဖြစ်စဉ်များကို အပြုသဘောဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီထောက်ခံပေးရာလည်း ရောက်မည် ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းက လူငယ်များအတွက် မဟာလှုပ်ရှားမှုတခုလည်း ဖြစ်မည့် ယခု ကမ်ပိန်းအား အဖွဲ့အသီးသီး၊ နယ်ပယ် အသီးသီးမှ မြန်မာ့ အနာဂတ်ကို ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ကြမည့် မျိုးချစ်သူတိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ပါသည်။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူတစ်သန်းကြိုဆိုရေး campaign ) အမည်ဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင် ပြည်ပခရီးမှအပြန် လေဆိပ်ဆိုက်ရောက်ချိန်မှ နေအိမ်သို့ အပြန်လမ်းခရီးတလျောက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသတခွင်မှ ပြည်သူလူထု သန်းနဲ့ချီပြီး စောင့်ဆိုင်းကြိုဆိုစေလိုသော ကမ်ပိန်း ဖြစ်မြောက်ရေး တပိုင်တနိုင် မိမိတို့နိုင်ရာမှ အားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော်ပါသည်။
ကိုနေမျိုးဇင် - ဖုန်းနံပတ် 0949328559 ၊
ကိုဝေလု - ဖုန်းနံပတ် 09450037685
တို့ကိုခေါ်ဆိုပြီး သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးထားသည့် အခြေခံဥပဒေတွင် Myanmar ဟု သုံးရန် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း မရှိ ( အခြေခံဥပဒေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ခြင်း )
ဇာနည်ဝင်း| June 29, 2012
ဖွဲ.စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ၁၉၄၇။ ၁၉၇၄။ ၂၀၀၈ တို့မှာ-အဓိပ္ပါယ်၊ သဘော အယူ အဆများ ဖွင့်ဆိုရာတွင် မြန်မာစာဖြင့် ရေးသားထားချက်များ အပေါ်တွင်သာ အခြေပြုရမည်။- ဟုရေးသားထားပါတယ်။
BURMA လို့ရေးသားထားတဲ့ ငွေစက္ကူများဟာလည်း လက်ရှိအချိန်တွင် တရားဝင်သုံးစွဲခွင့်ရှိပါတယ်။
LONDON, ENGLAND - JUNE 21: Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi addresses both Houses of Parliament inside Westminster Hall on June 21, 2012 in London, England. The Burmese opposition leader is onafour-day visit to the UK.
မိမိတို့ နိုင်ငံမှ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ချီးမြင့်သော ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်လ် ဆု အား နိုင်ငံ့ ဂုဏ်၊ မြန်မာ တမျိုးသားလုံး ကိုယ်စား ဆောင်ယူမြင့်တင်ကာ လက်ခံရယူအပြီး အလွန်ကြီးမြတ်လှသော တိုင်း ကမ္ဘာသိမွန်မြတ်လှသော ငြိမ်းချမ်းမှု ဆုတံဆိပ်များ၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များဧ။် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပေါ် ကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေမည့် ထောက်ခံအားပေးမှုများ
ကို ဆောင်ယူပြီး နိုင်ငံ အနာဂတ် ရောင်ခြည်အလင်းများ တပွေ့တပိုက်ဖြင့် အမိမြေဆီသို့ ယခုရက်ပိုင်း အတွင်း ဆိုက်ရောက်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ လာမည့် 30 ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် သို့ လူထုခေါင်းဆောင်ကြီး ရောက်ရှိ ခြေချတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ရောက် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
The audience at the Women's Forum special dinner in France in honour of Aung San Suu Kyi on Friday, June 29, 2012. Photo: Women's Forum for the Economy and Society
Aung San Suu Kyi speaks to an audience at Sorbonne University in France. Photo: La Sorbonne
A Sorbonne University student asks Aung San Suu Kyiaquestion on Thursday, June 28, 2012. Photo: La Sorbonne
An overview of the audience at Sorbonne University. Photo: La Sorbonne
An official at Sorbonne University presents Aung San Suu Kyi an award on Thursday, June 28, 2012. She spoke to students at the university as she winded up her tour of France and prepared to return to Burma. Photo: La Sorbonne
Marianne Mathieu shows Aung San Suu Kyiapainting at the Women's Forum dinner in France on Friday, June 29, 2012. Photo: Women's Forum for the Economy and Society
ဓာတ်ပုံ Reuters ပြင်သစ်နိုင်ငံ Orsay ပြတိုက်ကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်..
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ရှိ Orsay အနုပညာပြတိုင်တွင်ပြသထားသော ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင်ရေးဆွဲခဲ့သည့် " Les roulottes, campement de bohemiens aux environs d'Arles" အမည်ရှိ ပန်းချီကားကို ဇွန်(၂၈)ရက်နေ့က လေ့လာကြည့်ရှုနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(Photo-AFP)
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့နှင့် ခြောက်မိုင်အကွာရှိ
ဒေါ့ဖုန်းယန် မြို့နယ်ခွဲတွင် အစိုးရတပ်နှင့် KIO တပ်တို့ နှစ်ရက်ကြာ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ အစိုးရတပ်နှင့် KIO တပ်အကြား တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ်လို ဖြစ်ပွားနေစဉ် KIO နှင့် ပြည်ပ အခြေစိုက် ကချင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNO တို့ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်သွားရန် လိုင်ဇာဌာနချုပ်တွင် နှစ်ရပ်ကြာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။ ထို့နောက် KNO ၏ United Kachinland Army - UKA တပ်ဖွဲ့ကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီး KIA တပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ဇွန်လ ၂၈ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
“KIO နှင့် KNO သည် ကချင်အမျိုးသားရေးတွင် အတူလက်တွဲပြီးကာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး လုပ်ကိုင်ရ မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီ လုပ်ဆောင်သွားမည်။ သဘောတူညီချက်အတိုင်း KNO ကနေ ဖွဲ့စည်းထား တဲ့ UKA ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး KIA နဲ့အတူ ပူးပေါင်းသွားမည်” ဟု ကချင်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပါရှိသည်။
အင်အား ရာဂဏန်းရှိ UKA တပ်ဖွဲ့များသည် အများအားဖြင့် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် လှုပ်ရှားနေသည်ဟု သိရသည်။
ထိုသို့ ပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ “အမျိုးသားရေးအတွက် ပေါင်းလိုက်တာ။ တခုပဲ ဖြစ်အောင် ပေါင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့က အဖွဲ့တွေ အများကြီး အားလုံး စုစည်းသင့်နေပြီဆိုတာ ကချင်တိုင်းက သိသင့်နေပြီ” ဟု ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျီးနောင်က ပြောသည်။
ကချင်တိုင်းရင်းသားအရေး နိုင်ငံတကာတွင် ဆောင်ရွက်ရန် KNO ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်က ထူထောင်ခဲ့ပြီးသော်လည်း
နောက်ပိုင်းတွင် KIO နှင့် KNO အကြား သဘောထားများ ယှဉ်ပြိုင်သလို ဖြစ်လာခဲ့ရာမှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါနရီလက သဘောထား ပြန်လည် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။
KNO ကို ကချင်ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းရှင် ဒူဝါဘောမ်ဝမ် လရော်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဇင်းမယ်မြို့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များမှာ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ၊ ဒိန်းမတ်၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ နော်ဝေ၊ ဆွီဒင်၊ တရုတ်နှင့် ထိုင်း စသည့် နိုင်ငံများတွင် ရှိသည်။
လမ်းပြကြယ် ၇၀,၀၀၀ ကျော် NDF ဝင်ကြမည်ဟုဆို
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဦးအေးမြင့် ဦးဆောင်သည့် လမ်းပြကြယ် အဖွဲ့ဝင် ၇၂,၀၀၀ သည် မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု NDF ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ကြမည် ဖြစ်ပြီး တရားဝင် ပါတီဝင် လျှောက်လွှာပေးအပ်ပွဲ ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ City Star ဟိုတယ်၌ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း NDF ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဆွေ က ပြောသည်။
“လမ်းပြကြယ်က ဦးအေးမြင့် ကိုယ်တိုင် ၁၆ ရက်နေ့တုန်းက လုပ်တဲ့ ကျနော်တို့ပါတီ ဗဟိုဦးစီး အစည်းအဝေးမှာ ကိုယ်တိုင် လာပြောသွားပါတယ်။ သူနဲ့အတူ အဖွဲ့ဝင်အင်အား ၇၀,၀၀၀ ကျော် NDF ပါတီကို ဝင်မယ်လို့ ကတိပေးသွား ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပါတီကို သူအနေနဲ့ အပြင်ကနေ ဝန်းရံနေတာ နှစ်နှစ် ဝန်းကျင် ရှိပါပြီ။ အခုအခါမှာတော့ အထဲက ဝင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ သူကိုယ်တိုင် ပြောသွားပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထိုလမ်းပြကြယ် အင်အားစု ခုနှစ်သောင်း ကျော်မှာ ပဲခူးတိုင်း လေးမြို့နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်မှ အင်အားစု များ ဖြစ်ကြပြီး လက်ရှိ၌မူ NDF ပါတီသည် အဖွဲ့ဝင်အင်အား တသောင်းကျော်သာ ရှိသည်ဟု ဦးခင်မောင်ဆွေ က ပြောသည်။
ထိုသို့ လူအင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက်လာသည့် လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့ တည်ထောင်ခဲ့သူ ဦးအေးမြင့်အား NDF မှ ဗဟိုဦးစီး တာဝန် ပေးအပ်ရန် ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဒီ ၇၂,ဝဝဝ က စိတ်ပါလက်ပါ ဝင်ရောက်မယ့် တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် သုံးခုက အဖွဲ့ဝင် အင်းအားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပြကြယ်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် အားလုံး မဟုတ်သေးဘူး ခင်ဗျ။ ကျနော်နဲ့အတူ NDF ကို ဝင်ချင်တဲ့ လူတွေကိုလည်း စိတ်ပါမှ ဝင်ဖို့ ကျနော် ပြောပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း NDF ပါတီရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို သဘောကျတယ်။ ပြည်သူ အားကိုးထိုက်တဲ့ ပါတီတခု ဖြစ်အောင်၊ အင်အားတောင့်တဲ့ ပါတီတခု ဖြစ်အောင် ကျနော် အားပေးတာပါ။ NDF ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဦးဆောင်မှု အရည်အချင်းကို လေးစားတာလည်း ပါပါတယ်” ဟု လမ်းပြကြယ် အဖွဲ့၏
ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ ဦးအေးမြင့် က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြေယာ အသိမ်းခံရသည့် လယ်သမားများ၏ အရေး၊ ကလေးစစ်သားအရေး၊ လူ့အခွင့် အရေးနှင့် အောက်ခြေ လူတန်းစားများ၏ အရေးကို လိုက်လံ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လမ်းပြကြယ် အဖွဲ့ကို၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပြီးနောက် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အားလုံး၌ အဖွဲ့ဝင်အင်အား စုစုပေါင်း ၅ သိန်းကျော်ခန့် ရှိသည်ဟု ဦးအေးမြင့်က ဆိုသည်။
NDF သည် ၂ဝ၁ဝ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ဦး အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုထဲတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦးကွယ်လွန်ခဲ့၍ ၁၅ ဦးသာ ကျန်ရှိစဉ်တွင် သင်္ကန်းကျွန်းကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်
ခေါင်းဆောင်၍ ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦး နုတ်ထွက်ကာ ပါတီသစ် ထောင်သွားကြသည်။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင်လည်း ဒေါက်တာ မြတ်ဥာဏစိုး၊ ဒေါက်တာ သန်းဝင်း နှင့် ဦးခင်မောင်ဝင်း တို့ ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးက NLD ပါတီသို့ ထပ်မံ ကူးပြောင်း သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိ၌ NDF ပါတီတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ရှစ်ဦးသာ ကျန်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
NDF ပါတီမှ အခြား နိုင်ငံရေး ပါတီသို့ ကူးပြောင်းသွားသည့် ပါတီဝင်များမှာ ရာဂဏန်းခန့် ရှိပြီး အများစုမှာ ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်ဆွေ ပြောပြချက်အရ သိရှိရသည်။
အာဏာရှင် စစ်အုပ်စုက ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ယခုကတည်းက စတင် ပြင်ဆင်လှုပ်ရှားနေပါပြီ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပရမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူ့ ဘက်တော်သားတွေ အနိုင်မရစေဖို့ အတွက် ယခုကတည်းက အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုက အပျော့နည်း (ချော့တဲ့နည်း) နဲ့ ရော၊ အကြမ်းနည်း (ခြောက်တဲ့နည်း) နဲ့ရော၊ ကောက်ကျစ်တဲ့နည်းနဲ့ ရော နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး လက်တွေ့စတင် ကျင့်သုံးနေပါပြီ။
- ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်က ရောက်ရှိလာကြတဲ့သူတွေနဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ပြန်လည်ဖန်တီးပေးပြီး၊ ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအပေါ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေက အမြင်လွဲ နားလည်မှု လွဲပြီး ထောက်ခံပံ့ပိုးမှု လျော့နည်းကျအောင် ဆောင်ရွက်ပါပြီ။ (အခြားသော အရေးကိစ္စများ ဖြစ်သည့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံအရေးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သွေးစုပ်အမြတ်ထုတ်မှုများ အာရုံပျောက်သွားရန်၊ မြန်မာပြည်ရဲ့တိုင်ရင်းသားလူမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ဒေသမှာ မတရားတိုက်ခိုက်နေမှုကိစ္စတွေကို မှေးမှိန်သွားစေရန်) တို့ အတွက် တစ်ချက်ခုတ် အချက်ပေါင်းများစွာ ပြတ်စေသော ယုတ်မာလှည့်ဖြားသည့်နည်းကို အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုမှ လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
- မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုကို စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုက တစ်ဘက်လှည့်နဲ့အောင်ဆန်းဦးလို သွေးရင်းသားရင်းဖြစ်ပေမယ့် လူ့ အသိစိတ် ညံ့ဖြင်းလှတဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ကိုက် ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုကို ပြုလုပ်ပါပြီ။
- အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုရဲ့၂၀၀၈ ခုနှစ် တစ်ဘက်သတ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အသုံးချပြီး၊ နိုင်ငံတော်အမည်ကို “Burma” လို့မခေါ်ရဖူး၊ မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကို အပြည့်အ၀ မကောက်ခံရဲတဲ့ အမည်သစ် ဖြစ်တဲ့ “Myanmar” လို့ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီး စတင်စိန်ခေါ် ခြိမ်းခြောက်ပါပြီ။
- မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် အဖွဲ့ ဝင်များနှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအပါအ၀င် ကျောင်းသားလူငယ်အင်အားစုများအားလုံးအကြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ကြံဖန်တီး အပုပ်ချမှုတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းဆင်ကာ ဖေ့စ်ဘွတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာများ comment များမှတစ်ဆင့် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက် ဖြန့် ဝေရေးသားမှုများ ဆောင်ရွက်ပါပြီ။
- တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ် ပြည်သူတွေသာမက သံဃာတော်တွေအပေါ်ပါ နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ရိုက်ပုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ရဲ့သမိုင်းဆိုးကို မရိုးသားသော မမှန်ကန်သောနည်းဖြင့် အဖတ်ပြန်ဆယ်ရန်၊ စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍ အရေးပါရန်၊ စစ်တပ်အား တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုမှ အားကိုးသမှုပြုစေရန်၊ လွှတ်တော်အတွင်း စစ်တပ် လေးပုံတစ်ပုံ နေရာယူထားမှု မပျောက်ပျက်စေရန်အတွက် အဓိကဖန်တီးဆောင်ရွက်မှုများအနေနဲ့တိုင်းပြည်အတွင်း မတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်စေရုံသာမက၊ ပြည်ပရန် အန္တရာယ်ရှိနေရန် ပြဿနာမီးမွေးကာ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စကို ဖန်တီးပါတယ်။ ယခုဆိုရင် အီဂျစ်နိုင်ငံက စပြီး အခြားသော အစ္စလမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံများနဲ့မြန်မာပြည် ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ဖန်တီးပါပြီ။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်မှ အဖွဲ့ ဝင်များ ရွေးကောက်ခံရကာ နေရာရရှိရေးအား ဖြစ်မြောက်အောင် ဖန်တီးပေးမှုသည် အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုတို့ ၏ ရှေ့ တိုးမည့် ခြေလှမ်းများအတွက် နောက်တစ်လှမ်း ဆုတ်ပြသည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်မှ အဖွဲ့ ဝင်များအား လွှတ်တော်ထဲ နေရာပေးဝင်ခြင်းသည် အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုတို့အင်မတန်လိုလားနေသော “တရားဝင်” မှုအား ရယူလိုခြင်း၊ ပြည်သူ့ အစိုးရအဖြစ် အရေခြုံအသွင်ပြောင်းကာ စစ်အာဏာရှင်မှ အရပ်သားအာဏာရှင်အဖြစ် ဖန်တီးလိုခြင်း၊ အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွင်းသာမက နိုင်ငံတကာ၏ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံမှုနှင့် အကူအညီများ ရယူလိုမှုတို့ အတွက် စေတနာအရင်းမမှန်သော “နည်းနည်းပေး များများယူ” လိုသည့် “ပြည်ပကို ညာ၊ ပြည်တွင်းကို ဖိနှိပ်သည့် အလိမ္မာနည်း” ကို ပါးနပ်စွာ အာဏာရှင် စစ်အုပ်စုမှ လက်တွေ့ ကျကျ အကောင်အထည်ဖေါ် ကျင့်ကြံနေသည်ဟု မြင်တွေ့ ရပါသည်။
အာဏာရှင် စစ်အုပ်စုတို့ ၏ သိမ်မွေ့ ကောက်ကျစ်သော လှည့်ကွက်များ အကွက်ဆင်မှုများကို မျက်တောင်တစ်ဆုံးမျှသာ မကြည်ဘဲ၊ အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုတို့ ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် အချိန်ကာလတောက်လျှောက် လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့် ဖြစ်ပျက်မှုအရှေ့ အနောက် ဆက်စပ်ကြည့်မှသာ အနေအထားတစ်ခုလုံး အစအဆုံး ပြည့်ပြည့်၀၀ မြင်တွေ့နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုတို့ ၏ “ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရော” ကျင့်သုံးမှုနှင့် “စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး” နည်းဗျူဟာများအား ၁၉၆၂ ခုနှစ် အာဏာရှင်ကြီး နေ၀င်းလက်ထက်မှ စ၍ ယခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်တိုင်အောင် နှစ်ပေါင်း (၅၀) တိုင်အောင် အမည်အမျိုးမျိုးပြောင်း အသွင်အမျိုးမျိုးပြောင်း ကောက်ကျစ်မှုနည်းပုံစံ အမျိုးမျိုးပြောင်းကာ ချော့တစ်လှည့် ခြောက်တစ်လှည့်နည်းထက် ပိုပြီး ပါးနပ်လာသောနည်းဖြစ်သည့် “အယုံသွင်း” နည်းဖြင့် ကျင့်သုံးလာမှုအား တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုမှ သုံးသပ်လေ့လာ ဆက်စပ်စဉ်းစား အမှန်ရှူမြင်ကြမှသာလျှင် အာဏာရှင် စစ်အုပ်စု၏ ခေတ်သစ် အာဏာရှင်တည်ဆောက်မှုကို အချိန်မနှောင်းမီ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက် သတိပေး ပြောကြားအပ်ပါတယ်။
ယခုနှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် မရောက်ခင် အချိန်ကာလကတည်းမှ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ပြည်သူ့ ဘက်တော်သားများအတွက် အချိန်နာရီ မဖြုန်းတီး မပေါ့ဆဘဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့ ဘက်တော်သားများ ပြည်သူအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ရရှိရေးအတွက် တတ်နိုင်သည့် ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် တစ်ဦးချင်းစီ မိမိတို့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် “မတရားမှုများကို တွန်းလှန်၊ အမှန်တရားကို ဖေါ်ထုတ်၊ လက်တွေ့ ကျကျ ပူးပေါင်းလက်တွဲ” ပြီး၊ ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအပေါ် မေ၀၀ါး မတွေဝေ အမြင်မလွဲကြဘဲ တိုင်းပြည်အကျိုး အဓိကရှေ့ ရှူပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး အာဏာရှင် စစ်အုပ်စုလက်အောက်မှ အလျဉ်းကင်းဝေးစေရေးအတွက် လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြပါစို့ လို့အလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
အာဏာရှင် စစ်အုပ်စုက ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူ့ ဘက်တော်သားတွေ အပြည့်အ၀ အနိုင်မရရှိရေးအတွက် နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေ၊ တိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ လှည့်ဖြားမှုတွေ၊ သွေးခွဲရန်တိုက်မှုတွေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပဋိပက္ခဖန်တီးမှုတွေနဲ့စတင်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူလူထုအပေါင်းမှလည်း သတိတရား အသိတရား လုံ့ လ၀ီရိယဖြင့် အချိန်မနှောင်းခင် အာဏာရှင် စစ်အုပ်စုရဲ့၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်နေမှုများအပေါ် ၀ိုင်းဝန်းလက်တွဲ၍ ပြန်လည်တိုက်ဖျက်ကြပါစို့ ဟု တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေဖို့ ထက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာများကို ယခုကတည်းက ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ က ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုရဲ့အမျိုးသားရေးတာဝန်ပါ။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥေ...
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆန်ခါတင် ၅ ဦးကို ရန်ကုန်မှာ ဂုဏ်ပြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုရေးအတ...
မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးထားသည့် အခြေခံဥပဒေတွင် Myanmar ...
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ရောက် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်...
သောက်ရေကန်အဆိပ်ခတ်မှုကြောင့် မြေပုံမြို့တွင် နှစ်ဖက...
ဗကသ ဟာ တရားဝင် အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် မှတ်ပုံတင်...
မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဘားမား လို့ ခေါ်ဝေါ်...
အမေစု ပြန်အလာခရီး ကို နိုင်ငံတော် အစိုးရက ဒီလိုကြိ...
စစ်တွေရောက် ဒါရိုက်တာ စံရွှေမောင်နဲ့ မေးမြန်းချက်
မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် စဉ်းစားရမယ့် အချိန်
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရန်ပုံငွေအတွက် ရန်က...
ကိုရီးယား လေကြောင်းလိုင်းမှ ရန်ကုန်မြို့နှင့် တိုက...
"ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးရှောင် မိသားစုများအတွက် ပေးအပ်...
မလေး တွင် ဇနီး နှင့် ကလေး ကို တွေ့ ခွင့် မရ သဖြင့်...
“သမိုင်းလမ်းဆုံ အနီး နှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးပြိုကျမှုြ...
ပါရီမြို့တော်ခန်းမကြီးမှာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရီမြို့သူ...
ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရီမြို့သူမှတ်တမ်းလက်မှတ် ရယူပြီးနော...
ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရီမြို့သူဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခ...
အမေစုနဲ့ ပြင်သစ် အင်တာဗျူး....( ရုပ်သံ ) ပြင်သစ်လိ...
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဟော...
လူရွှင်တော် ဒါရိုက်တာ ကိုဇာဂနာက လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်...
သတိမူ မိသော မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ အမှားအယွင်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေး...
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP) က မနေ...
ဒီတသက် ငါးထောင်တန်ဖုန်း ကိုင်ရမဲ့ လက္ခဏာ ပါရဲ့လား.....
Rare Earth သတ္တုဒြပ်စင်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ (ရုပ်သံ)
မြစ်ကြီးနားနှင့် ၀ိုင်းမော်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်အချို့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်သစ် သမ္မတ နဲ့အယ်လီဆေး နန်း...
ပြင်သစ်သမ္မတ ဝက်ဆိုဒ်သတင်းစာမျက်နှာတွင်ဖေါ်ပြသော သမိ...
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟ...
ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးတဲ့ ၃၆ နှစ်မြောက် နေ့အခမ်...
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်မှာ ခိုလှုံနေကြတဲ့ ကချင် တ...
Win-Win Solution “သူနိုင် ကိုယ်နိုင် ဖြေရှင်းမည့် ...
လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီနှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်...
မြန်မာပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ြ...
မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ရ...
မြ၀တီတွင် ရွှေဆိုင် ဓားပြတိုက် ခံရပြန်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ မြန်မာနိုင...
မီဒီယာတွေကို မျိုးကျော့မြိုင် သတိပေး
လုပ်အားခေါင်း ပုံဖြတ်နေ ခြင်းကို လုံးဝအကာ အကွယ် ပေ...
ခန္တီးထောင်က နောက်ဆုံး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဦးညီပု ...
“လူမှုရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု ဆိုင်ရာ ညီလာခံ”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လန်ဒန် စံတော်ချိန် ဒီကနေ့ ညနေ...
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာ နိုင်ငံသား ...
ရောစ် ဒန်ကလီ ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ အလှည့် လဲ
ကလေးမြို့၊ အောင်မင်္ဂ လာနှင့် အောင်မြေ မာန် NLD ရပ်က...
ကချင်ပြည်နယ်၊မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေမှာ ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့က မမီး...
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ GW ခေါင်းဆောင်တို့ တွေ့ဆုံ...
ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း ရဲ့ အဖွဲ့ ကိုဒေသခံ အာဏာပိုင်ေ...
ဘင်္ဂါလီ ၈၂ ဦးအား လဝက ပုဒ်မဖြင့် ရေးမြို့ တရားရုံးမ...